I-China Plant Total RNA Isolation Kit Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-Foregene
Ikhithi isebenzisa ikholomu yokuphotha kanye nefomula ethuthukiswe yi-Foregene, engakhipha ngempumelelo i-RNA ephezulu nekhwalithi ephezulu ezicutshini zezitshalo ezahlukahlukene ezinokuqukethwe okuphansi kwama-polysaccharides nama-polyphenols.Kumasampula ezitshalo anama-polysaccharides aphezulu noma okuqukethwe kwama-polyphenols, kunconywa ukusebenzisa i-Plant Total RNA Isolation Plus Kit ukuze uthole imiphumela engcono yokukhipha i-RNA.Ikhithi inikeza ikholomu ye-DNA-Cleaning engasusa kalula i-genomic DNA ku-supernatant kanye ne-tissue lysate.Ikholomu ye-RNA kuphela ingabopha ngempumelelo i-RNA.Ikhithi ingacubungula inani elikhulu lamasampuli ngesikhathi esisodwa.
Lonke uhlelo aluqukethe i-RNase, ngakho-ke i-RNA ehlanziwe ngeke yehliswe.I-Buffer PRW1 kanye ne-Buffer PRW2 ingaqinisekisa ukuthi i-RNA etholiwe ayingcoliswanga amaprotheni, i-DNA, ama-ion, nezinhlanganisela eziphilayo.
Isilondolozi PRW1, Isivimbeli PRW2
I-ddH yamahhala ye-RNase2O, Ikholomu Yokuhlanza I-DNA
Ikholomu Ye-RNA Kuphela
■ Ukusebenza ekamelweni lokushisa (15-25℃) kuyo yonke inqubo, ngaphandle kokugeza eqhweni nokushisa okuphansi kwe-centrifugation.
■ Ikhithi ephelele ye-RNase-Free, asikho isidingo sokukhathazeka ngokuwohloka kwe-RNA.
■ Ikholomu Yokuhlanza I-DNA ibophezela ngokukhethekile ku-DNA, ukuze ikhithi isuse ukungcoliswa kwe-genomic DNA ngaphandle kokwengeza i-DNase.
■ Isivinini esisheshayo: kulula ukusebenza futhi singaqedwa phakathi nemizuzu engama-30.
■ Ukuphepha: asikho i-reagent ephilayo edingekayo.
■ Ikhwalithi ephezulu: Izingcezwana ze-RNA ezihlanziwe zimsulwa kakhulu, azinawo amaphrotheni nokunye ukungcola, futhi zingahlangabezana nezinhlelo zokuhlola ezihlukahlukene ezansi nomfula.
Ilungele ukukhishwa nokuhlanzwa kwe-RNA ephelele kumasampula ezicubu zezitshalo ezintsha noma eziqandisiwe (ikakhulukazi izicubu zamaqabunga ezitshalo ezintsha) ezine-polysaccharide ephansi kanye nokuqukethwe kwe-polyphenol.
I-Plant Total RNA Isolation Kit Plus icutshungulwe u-50mg wamaqabunga amasha e-polysaccharides nama-polyphenols, kanye ne-RNA ehlanzekile engu-5% yahlolwa nge-electrophoresis.
Ikhithi ingagcinwa izinyanga eziyi-12 ekamelweni lokushisa (15-25 ℃) endaweni eyomile, kanye no-2-8 ℃ isikhathi eside (izinyanga ezingu-24).
I-Buffer PSL1 ingagcinwa ku-4 ℃ inyanga engu-1 ngemva kokwengeza i-2-hydroxy-1-ethanethiol(ongakukhetha).
Okwedlule: Ikhithi Yokuzihlukanisa Yeseli Ye-RNA
Olandelayo: I-Plant Total RNA Isolation Kit Plus
Imbewu Yezitshalo(i-Polysaccharide Polyphenol ecebile, encane ...
I-Blood SuperDirectᴹ PCR Kit(UNG)-Heparin
Ikhithi ye-DNA Midi yegazi (1-5ml)
I-General Plasmid Mini Kit